कथा भन्ने मास्टर « Himal Post | Online News Revolution
कथा भन्ने मास्टर
प्रकाशित मिति : २०७६, २० भाद्र ०५:४१
कहिलेकहीँ कक्षामा आफूले कथा पढाइरहँदा केटाकेटीले मेरै पो कथा बनाइरहेका छन् कि भनेर डराउने गर्छु । अझ केटाकेटी मुसुमुसु हाँस्न थाले भने त मेरो सातो नै जान्छ । कता हो कता शङ्काले घेर्न थाल्छ र म थाहा नपाउने गरी किताब माथि सार्छु । अनुहार छोपिन्छ । म घाँटीलाई मरक्कै पार्छु र भुइतिर हेर्छु । जुत्ताका तुना पनि ठिक छन् र पाइन्टको ‘चेन’ पनि । आश्वस्त हुन्छु र फेरि कथा अगि बढाउँछु ।
मलाई नेपाली पढाउने गुरुलाई जस्तो कथा कण्ठ हुँदैन । म हरेक वर्ष त्यही कथा नयाँ मानेर पढ्छु । हरेक वर्ष फरक तरिकाले पढाइरहेको हुन्छु ।
धेरै दिन भएको थियो अङ्ग्रेजीको ग्रामर पढाउँदा पढाउँदा दिक्क भएको । सायद म भन्दा पनि विद्यार्थी ।
उनीहरूको माग थियो आज मैले कथा सुनाउनु पर्छ । हुन त कक्षामा केही त्यस्ता विद्यार्थी पनि थिए, जसलाई मेरो कथा फिटिक्कै मन पर्दैनथ्यो । यो मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो भने, उनीहरूलाई मैले पढाएको राम्रो लागेको वेला मलाई हेरेर बस्थे । मन नपरेको वेला, किताबमा हेरेर बस्थे । एकोहोरो ।
तर म त्यस्तो मेरा कथा मन नपर्नेका कुरा छाडिदिन्थेँ । आखिर थिए नि त मेरा कथाका श्रोताहरू पनि । उनीहरू मलाई कहिलेकाहीँ त बाटोमा भेट्दा पनि कथा सोध्थे ।
तर त्यसदिन मसँग कुनै कथा थिएन । किताबका कथा सबै सुनाइसकेको थिएँ । कथा सुनाउने मेरा बहाना गजवका थिए । एक, लामो बिदा पछि स्कुल खुलेको दिन । दुई, कुनै कारणवस कक्षामा विद्यार्थी थोरै भएको दिन । तीन, हरेक शुक्रवार । यो प्रक्रिया वर्षौँ भरी चलिनैरहन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त दुइतिन दिन नै लगाएर लघुउपन्यासहरु समेत सुनाएको याद छ ।
अँ, तर त्यसदिन मसँग कुनै कथा थिएन ।
महिनौँदेखि म एउटा मानसिक तनावमा थिएँ । त्यो समस्या न कसैलाई भन्न सकिरहेको थिएँ न त त्यसको निकास नै भेटिरहेको थिएँ ।
विशेषतः कक्षा आठमा जान मलाई सकस परिरहेको थियो । कारण, सनमले मलाई एकोहोरो हेरिरहनु । हुन त सम्भावना, यस्तो भएको पनि हुनसक्थ्यो, मैले नै सनमलाई एकोहोरो हेरिरहनु ।
तर स्पष्ट के थियो भने, जब मैले उतिर हेर्थेँ । उसले पनि मलाई नै हेरिरहेकी हुन्थी । यो प्रक्रिया जहाँतहीँ चलिराखेको हुन्थ्यो । कक्षामा । मर्निङ प्रेमा । क्यान्टिनमा । धारोमा । जताततै । जहिलेसुकै ।
मैले उतिर हेर्नु र उसले मतिर हेर्नु संयोग मात्र हैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । किनभने हाम्रा आँखा जुधेपछि ऊ पनि हाँस्थी । एक सेन्टिमिटर गाला तन्काउँथी । तर आवाज शून्य । म भने यता दुइचारवटा जुँगा मात्रै हल्लाउँथे । आफ्नै मात्र कानले सुन्ने गरी आवाज आउँथ्यो–हेँ ।
मैले उनीहरूलाई एक पेज ह्यान्ड राइटिङ्ग लेख्न दिएँ ।
साँझ रेस्टुरेन्टमा रक्सी खाँदै गर्दा साथी योगन्द्रलाई यो कुरा सुनाएँ । योगेन्द्र जो मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी । स्कुलमा गणित पढाउँथ्यो ।
ऊ छाँगाबाट खसे झैँ भयो । एक ‘स्वाक’ रक्सी तान्यो र निधार मिच्दै भन्यो, ‘थेत् यार । तिमी यस्तो कुरा नगर त मसँग ।’
गर्न मन त कहाँ थियो र मलाई पनि । आफ्नै विद्यार्थी अनि प्रेम ! कस्तो उकुसमुकुस लाग्दो विषय ।
त्यसपछि मैलै अरू कुरै गरिनँ । तर मनले भने उसैलाई खोज्न थालिसकेको थियो । ऊसँग बोल्ने बहाना । ऊसँग भेट्ने बहाना ।
तर यी सब सम्भव थिएन । मेरो, उसको र सिङ्गो विद्यालयको इज्जतको सवाल थियो ।
एक दिन अफिसमा कपी ल्याएर चेक गर्दैगर्दा उसको कपीमा अनौठो नाम देखेँ । सनम कार्की ‘मोटाकली’ ।
मोटाकली ? के हो यो ? तत्काल शब्दकोशमा शब्द खोजेँ । तर शब्दकोशमा भेटिन । हुन त हरेक नामको अर्थ हुनुपर्छ भन्ने के छ र ? कतिपय वेअर्थी नाम नहुने हैनन् ।
तर मोटाकली ?
बेअर्थी नामको पछाडि पनि त एउटा कथा हुन्छ । जस्तो, पण्डितले राखिदिएको । बाउले राखिदिएको । जन्मदर्ता गर्दा एकातिर लेख्दिएको । यस्तैयस्तै ।
तर मोटाकली चाहिँ कसले राखिदिएको ? या किन राखेको ? यसको पनि त एउटा कथा हुन सक्छ ।
कक्षामा गएर कापी दिँदै भने, ‘के छ मिस मोटाकली ?’
सबै हाँसे । सिवाय हामी दुई ।
ऊ चुपचाप उठी र कापी लिई । यसो गर्दैगर्दा एक पटक आँखा तरेर हेर्न पनि भ्याई । के त्यो हेराइमा माया थियो ?
टिफिन टाइममा उसलाई मछेउँ बोलाएँ ।
‘मोटाकली भनेको के हो ?’ सोधेँ ।
‘नेवारी भाषा हो ।’ उसले भुईँतिर हेर्दै भनी ।
‘के अर्थ ?’ मैले सोधेँ ।
‘खोइ । एउटा चिज हो ।’
‘कस्तो चिज ?’
‘मलाई था’छैन ।’
‘त्यसोभा’ नाम किन राखेको त ?’
‘अजीले त्यसै भन्नुहुन्छ ।’ उसले भनी ।
‘अजी ?’ मेरो प्रश्न थपिएको थपियै ।
‘घरबेटी अजी ।’
‘त्यसोभा’ तिम्रो अजीलाई भेट्न म तिम्रो रुममा आउँछु ।’ मलाई बहाना चाहिएको थियो ।
उसले एक पटक पुर्लुक्क हेरी । निधारमा आएको कपाललाई टाउको हल्लाएर मिलाई ।
‘कतिखेर ?’ उसको प्रश्न थपिन थाल्यो ।
‘एक पटक घर गएर आउँछु ।’ जिस्किएँ, ‘नास्ता बनाएर राख है ।’
‘के नास्ता पकाम् ?’ उसले सोधी । अलि सहज भएर बोली ।
नजिकै प्रिन्सिपल आएको देखेर भनेँ, ‘एज यु लाइक् ।’
खुरुखुरु घर आएँ । मनमा अनौठो तरङ्ग फैलिइरहेको थियो ।
सफल सर । तर सबै केटाकेटीले राखिदिएको नाम चाहिँ कथा भन्ने मास्टर । हुन पनि उहाँ हामीलाई बारम्बार कथा भनिरहनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैले पनि कथा लेख्नुहुन्थ्यो र सुनाउनु हुन्थ्यो ।
मेरो नाम सनम कार्की । घर वन्दीपोखरा । तानसेनबाट पाँच किलोमिटर पश्चिम । अं सदरमुकामबाट नजिकै भए पनि हाम्रो गाउँमा बोर्डिङ स्कुल नभएकाले बाबाले मलाई तानसेन राख्नुभएको थियो ।
टक्सारटोलको एक पुरानो घरको दोस्रो तलामा डेरा । आमा घरमै व्यस्त । बाबा खरिदार । गुल्मीको एउटा गाउँमा गाविस सचिव ।
कोठामा आएपछि झोलालाई खाटमा फालेँ । जुत्ता फुकालेँ र खाटमुनि राखेँ । छिट्छिटो ड्रेस फुकालेर अजीलाई भेट्न गएँ । एकतला माथि ।
अजी घरमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो । हुन पनि उहाँका छोरा भएनछन् । तीन छोरीको बिहे भएर कता कता आफ्नै घरमा । अजाले छोडेर गएको पनि पाँच वर्ष भैसकेको ।
अनि अजीकी साथी म भएकी थिएँ । यसो गर्नु परे पनि म । उसो गर्नु परे पनि म । मासु पाके पनि म । चिया पाके पनि म ।
तर उहाँले मेरो नाम भने विगारीदिनुभो । उहाँले मेरो नाम मोटाकली राखिदिनुभो ।
मोटाकली । दियो । उज्यालो । उहाँले यसै भन्नुभो, ‘तिमी उज्याली छेउ । दियो जस्तै धपधप वलेकी ।’
उहाँले कान्छी छोरीलाई समेत मोटाकली भन्नुहुँदोरहेछ । म पनि उहाँलाई उहाँकी कान्छी छोरी जस्तै लाग्दी रहिछु ।
बिस्तारै मलाई पनि मोटाकली नाम प्रति माया बढेर आयो । अनि नामको पछाडि कहिलेकाहीँ मोटाकली झुन्ड्याउन थालेँ ।
तर यत्तिको लागि सर मकहाँ आउने कुराले मभने अचम्ममा परेँ ।
अजी तरकारी किन्न बजार जानुभएको रहेछ । फर्केर आएँ । चिया पकाएर खाएँ । कापीकिताव निकालेर होमवर्क लेख्न थालेँ ।
तर मन भने कता कता पुगिरह्यो । आफ्नै ठेगानमा रहेन मन । कतै हराए जस्तो ।
झ्यालबाट बाहिर हेर्न थालेँ । बा, सर सञ्चालिकै आउनुहुने पो हो कि ! सरको कुरामा विश्वास नभए पनि अविश्वासै गरिहाल्नुपर्ने कारणै पनि त थिएन ।
किनकिन मलाई पनि सफल सर मन पर्न थालेको थियो । उहाँलाई हेरुँहेरुँ लाग्न थालेको थियो । बोलुँबोलुँ लाग्न थालेको थियो । उहाँको मन्द मुस्कान । मधुर स्वर । शान्त अनुहार । किनकिन मलाई उहाँसँग माया बसे हुन्थ्यो झैँ लाग्न थालेको थियो ।
तर मेरो उमेर कहाँ पुग्नु ? भर्खर पन्ध्र वर्ष ।
के सरले पनि मलाई मन पराउनुहुन्छ ?
के कुनै चौबिस वर्षे ठिटोले पन्ध्र वर्षको आफ्नै विद्यार्थीलाई प्रेम गर्न सक्छ ?
नभन्दै सरलाई परबाट आउँदै गरेको देखेँ । अब भने ममा उकुसमुकुस सुरु भो । के गरूँ र नगरुँको दोधारमा अल्झिएँ । उहाँलाई म बस्ने घर त थाहा थियो । तर कोठा थाहा थिएन ।
उहाँले गेटमा आएर माथि हेर्नुभयो । मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्नुभयो ।
‘माथि आउनु ।’ मैले भनेँ ।
म ढोकाको चुकुल खोलेर बाहिर निस्केँ । सर आउनुभयो । हल्का हल्का हाँस्दै । सर भित्र आएर खाटमा बस्नुभयो । मैले चुकुल लगाइनँ ।
म टुलमा बसेँ । सरले यताउता हेर्नुभयो । निक्कैवेर सम्म केही बोल्नुभएन । मैले पनि केही भन्नै सकिनँ ।
लामो सास फाल्नुभयो र भन्नुभो, ‘मोटाकली, खै त नास्ता ?’
‘छैन ।’ डराउँदै, शर्माउँदै र केही अक््मकाउँदै भनेँ ।
‘आउँछु जस्तो ला’थिएन ?’
‘अनि किन त ?’
‘त्यसै ।’ यति भनेर म चिया बसाल्न लागेँ । उहाँले चुपचाप हेरिरहनुभो । मलाई लाज लागिरह्यो ।
तर चिया मात्रै पनि के दिनु जस्तो लाग्यो । त्यसैले चिया बसालेर म बिस्कुट किन्न तल पसलमा झरेँ ।
पसलको दाइ नहुनुहुँदोरहेछ । यता उता हेरेँ देखिनँ । पसलमै कुरेर बसेँ । अहँ दाइ आउनुभएन । उता चिया उम्लिसक्यो होला । यता आफ्नो भने मन पोलेर आँखाबाट निस्केला निस्केला जस्तै भइसक्यो ।
फर्केर जाऊँ, के खालीहात जाऊँ । नफर्कूँ उता चिया के भैसक्यो होला । सरले के भन्नुहोला ।
दाइ आउनुभो । घरभित्रैवाट । ट्वाइलेट जानुभएको रहेछ । बिस्कुट लिएर कोठामा पुग्दा सरले एउटा किताब हेरिरहनुभाथ्यो । त्यो स्कुलबाटै ल्याएको बालकथाको किताब थियो ।
सरले मलाई ढोकामा देखेर एकफेर हेर्नुभयो ।
ग्यास बन्द थियो । सायद सरले आफै बन्द गरिदिनु भयो होला । मलाई झन् कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो ।
चियालाई गिलासमा राखेर सरलाई दिएँ ।
भन्नुपर्ने त ‘सर चिया लिनुस्’ नै हो । तर मुखबाट शब्द निस्क्यो, ‘अँ ।’ बिस्कुट थालमा राखेर दिएँ । फेरि पनि शब्द उही, ‘अँ ।’
‘तिमीलाई खै त ?’ सरले सोध्नुभयो चिया गिलास समाउँदै ।
‘अघि नै खाइसकेँ ।’ टुलमा बस्दै मैले भनेँ ।
सरले अरू केही नबोली चियामा बिस्कुट चोवलेर खानुभयो ।
चिया सकिए पछि सोध्नुभयो, ‘खै त तिम्रो अजी ?’
‘बजार जानुभाछ रे । अब आउनुहोला ।’
नभन्दै अजी आइपुग्नुभो । पावरवाला चस्मा । फुलेका कपाल । चाउरी परेका गाला । कुप्री परेको जिऊ । र सिधा लट्ठी ।
सरले हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो । तर अजीले मुखले मात्रै फर्काउनुभयो । म बसेको टुल अजीलाई दिएँ । म सर नजिकै खाटमा गएर बसेँ ।
‘अजी, उहाँ सर । मोटाकली भनेको के हो भनेर बुझ्न आउनुभएको ।’ मैले सरतिर नहेरी खुरखुरु भनेँ ।
अजीले सरतिर हेर्नुभयो । उहाँले हेरेपछि भने मलाई पनि अलि सहज भयो ।
‘के मोटाकली बुझ्ने बाबु ?’ अजीले सोध्नुभयो ।
‘सनमको नाम मोटाकली राख्दिनुभारैछ । त्यसैले अजी ।’ कति सजिलै राखिदिनुभएको सरले ।
‘केही हैन बाबु ।’ अजी हाँस्नुभयो । एकचोटी खोक्नुभयो ।
‘केही त होला नि अजी यसको अर्थ ।’ सरले पनि हाँस्दै भन्नुभो ।
‘ल बाहिर हेर त झ्यालबाट,’ अजीले भन्नुभो ।
सरले बाहिर हेर्नुभयो । मैले पनि हेरेँ । सडक पारिको घर ठिङ्ग उभिएको थियो । बरन्डामा फुल फुलेका थिए । झ्याल ढोका बन्द थिए । लुगा सुकाइएका थिए ।
‘के देख्यौ ?’ अजीले सोध्नुभयो ।
हामी दुवै वाल्ल प¥यौँ । के भन्ने ? हामी हाँस्यौँ मात्र ।
‘त्यहाँ झुन्डिएर बसेको केही चिज देख्यौ ?’
हो त ! त्यहाँ पानसजस्तो वस्तु झुन्ड्याइएको रहेछ । हामीले ख्याल नगरेका रहेछौँ ।
‘पहिले पहिले बिजुली थिएन । मान्छेहरू रातीमा हिँड्न सजिलो होस् भनेर यस्तोमा बत्ती बालेर राख्ने चलन थियो । विशेष गरेर असोजको औँसी देखि कात्तिके औँसी सम्म यो बालिन्थ्यो । यसलाई मोटाकल भनिन्छ ।’ अजीले वुझाउनुभो । र लामो सास फेर्नुभो ।
‘अनि मोटाकली ?’
‘बाबु पनि । जिस्केर भनेको यिनलाई । उज्याली भएकीले ।’ अजी यति भनेर जान खोज्नुभो, ‘लौ त म माथि जान्छु ।’
हामीले एकएकवटा झ्यालबाट हे¥यौँ । ती देखिएका घरहरूमा एक–एक वटा मोटाकल झुन्डिएका थिए, तोरणमा प्रसाद जस्तै । साँच्ची ! हाम्रै झ्यालनिर पनि त झुन्डिएको रहेछ !
‘म जान्छु है ।’ सरले भन्नुभो ।
मैले हुन्न भन्ने कुनै कारण भेटिनँ । हुन्छ भनेँ ।
सर जानुभो । तर किनकिन खाना खाएर जानुभएको भए पनि त हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो ।
मे आइ ह्याभ अटेन्सन् प्लिज !
(सर कथा सुनाएर बाहिर निस्केपछि एउटा ब्याकवेन्चर अगाडि आयो । र आफ्नो कुरा भन्न थाल्यो । उसलाई आफ्नो कुरा अर्को सर नआइपुगुन्जेलमा सकाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।)
म । मेरो नाम सन्दीप कुमार । तिमीहरू सबैलाई थाहै छ ।
भर्खरैको कथा सुनिसक्यौ । डिड यु लाइक् ड्याट ? नो वे !
यी कथा भन्ने मास्टर संसारकै झुर कथाकार हो । साँच्चै भनूँ, उसलाई आफ्नै कथाको अन्त्यसँग डर लाग्छ ।
हैन भने किन ऊ अगिको कथा बिचमै छोडेर जान्थ्यो ? उसलाई कथा बिचमै छाड्ने अधिकार छ ?
बेल ! भनूँ यसको अन्त्य ?
मलाई त्यसैदिन रिस उठेको थियो, जुन दिन उसले मेरी सनमलाई मिस मोटाकली भनेको थियो ।
उसले किन अब सनमको लव सन्दीपसँग पर्छ भनेर भन्न सकेन ? आइ लव सनम । सी लव्स सन्दीप । अफकोर्स मी !
(त्यसैवखत विज्ञानसर आइपुगे । र उसको न्यारेसन सकियो । तर यस कथाको अर्को अनुच्छेद अझै बाँकी रह्यो । किनभने अन्तिम घण्टीमा अफिसमा गएर सनम उर्फ मोटाकलीले कथा भन्ने मास्टरलाई उजुरी गरिसकेकी थिई । यसको बाँकी भाग भोलि बिहानको मर्निङ प्रे सम्म कुर्नु हामी सबैको लागि हितकर हुनेछ ।)
जब मिठाईको लोभ देखाउँदै मेरो इज्जत लुटियो
-दिपक घिमिरे कक्षा दुईमा भर्ना भएर स्कुल जान थालेको थिएँ । अलिअलि सम्झना छ मलाई
बास्कोटाकाण्डले खल्लीबल्ली: तनाव बढेपछि ओलीले बोलाए प्रचण्डलाई
काठमाडौं- बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यबाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच
राजिनामा दिने तयारीमा बास्कोटा: प्रधानमन्त्रीसँग के भयो कुरा ?
काठमाडौं- सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिन पार्टीबाट तिब्र दवाव भएपछि त्यसको तयारी
कक्षाको झ्यालढोका थुनेर छात्रामाथि शिक्षकले गरे यस्तो हर्कत
काठमाडौं– स्कुलका छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले ५५ वर्षका एक शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ।